Uyazifela Ngemfuyo Owafundiswa Umkhulu Wakhe Ukwinakekela - iReport South Africa News
Uyazifela Ngemfuyo Owafundiswa Umkhulu Wakhe Ukwinakekela
Uyazifela Ngemfuyo kaMkhulu uNksz Luyanda Qwabe wakwa Nongoma esgodini saseNgolotsha, othi wafundiswa umkhulu wakhe ukwinakekela, uthi uyazibambela yena mathupha akadinge sizo lwamuntu uma egulelwa izimbuzi noma izinkomo uyazihlanganisela nje amakhatha khatha ayilaphe ivuke iphile imfuyo yakubo.
“Ngikhule umkhulu esibambisa izimbuzi mayezelapha,umalume aye nam entaben sambisinkomo sfike sidle umncaka namathunduluka. Abaning bayebemangale indlela engizazi ngakhona izinto enkinga yami ngiyilentombazane enakayo nengesona iscwicwicwi cha angisona.
When it comes to imfuyo okuningi ngyakwazi ngisho ugulelwa imbuzi yakho noma inkomo yakho ngingaktshela nje ukuthi hlanganisa ini nani iphile imbuzi yakho.
Ngingumkhaya nje kaaabi futhi”
← #PoliceMinistry rejects false reports of missing Senzo Meyiwa case docket
#KFCProposal : KFC, FNB, Huawei SA, Audi SA, Cricket SA and Pick n Pay to sponsor beautiful couple for wedding →
September 27, 2019 September 27, 2019 Staff Writer
October 4, 2019 October 4, 2019 Staff Writer